Nanomboka ny 1 aogositra hatramin’ny 5 novambra lasa teo, 38 ireo olona voamarina fa nahitana trangan’aretina pesta tamin’ireo olona rehetra nanaovana fitiliana. Pesta atodintarina ny 32 ary pesta aretin-tratra ny enina. Amin’ireo olona 32 voamarina fa voan’ny pesta atodintarina, 28 ireo efa manaraka fitsaboana eny anivon’ny tobim-pahasalamana, raha namoy ny ainy kosa ny efatra. Momba ny pesta aretin-tratra indray, enina ny voamarina fa nahitana ny trangan’aretina ka namoy ny ainy. 12 ny distrika ahitana ireo trangan’aretina voamarina fa pesta : Ambalavao, Ambatofinandrahana, Ankazobe, i Miarinarivo, i Tsiroanomandidy, i Befotaka, i Manandriana, i Midongy Atsimo, Anjozorobe, i Moramanga, Ambositra ary i Betafo. Nanamarika ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fahasalamana fa raha misy tranga mampiahiahy na koa mila fanazavana, azo antsoina maimaimpoana ny laharana maitso 910.
Hahazo kamiao lehibe manokana arifomba mpitatitra fako miisa 16 ny Samva. Naseho, omaly teny amin’ny foiben-toeran’ny Samva eny Ampasampito-Nanisana, ny santionany amin’ireo fiara lehibe mpitatitra fako ireo. Nisy ny fiaraha-miasa eo amin’ny minisiteran’ny Rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana, ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ary ny Service autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo (Samva) nahazoana ireo fitaovana ireo. Ankoatra izay, hahazo daba lehibe fanariam-pako iraisana miisa 51 koa ny Samva ao anatin’ity tetikasa ity. « Tsy misy ny olana eo amin’ny kaominina sy ny Samva », hoy ny lefitra voalohan’ny ben’ny Tanàna, ny kolonely Ramboasalama Emilien, nandritra izany.
Ho fananan’ny Samva madiodio fa tsy hofain’izy ireo intsony ireo fiara lehibe mpitatitra fako manokana sy arifomba natolotra ireo. Tokony hohajaina koa ny fotoana fanariam-pako ka amin’ny 5 ora hariva ka hatramin’ny 8 ora alina ny fe-potoana hanatanterahana izany hahafahan’ny kamiao manala fako amin’ny alina.